QM oo si ku meel gaar ah cunaqabateynta hubka fudud uga qaadday dalka Soomaaliya. | Sahan radio
QM oo si ku meel gaar ah cunaqabateynta hubka fudud uga qaadday dalka Soomaaliya.
Cunaqabateynta Soomaaliya waxa la saaray sanadkii 1992, markaasi oo hoggaamiyayaashii dagaalka ay ku dagaallamayeen gacan ku heynta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Dowladda cusub ee Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirtay sidii cunaqabateynta looga qaadi lahaa si dalkaa ,taasi oo ay ku micneyeen in ay dagaal kula jiraan kooxaha Al-shabaab .
Dalalka kujira Golaha Ammaanka ee Qramada Mdoobay, oo ay ka mid yihiin Britain iyo France ayaa shaki ka qabay arrinta qaadista cunaqabateynta,Kulan balan oo laga galay arrinta ayaa la isla qaatay ugu danbayntii in meel dhexe la isugu yimid, la iskuna raacay in la qaaday cunaqabateynta hubka fudud muddo sanad ah.
Qaraarka Golaha Ammaanka oo tirsigiisu yahay 2093 waxa ay tiri waxa uu ka jawaabayaa baaqii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee hal mar uu albaabka uu ku garaacay, kaasi oo mideynaya hawsha horumarinta Qaramada Midoobay iyo midd bini’aadanimada ee uu jiheynayo wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay.
Waxaa muhiim ah ayaa lagu yiri qoraalka Danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay, iyadoo la aqoonsanayo horumarka dowladda Soomaaliya, in Golaha Ammaanka uu isku raacay inuu joojiyo cunaqabateynta hubka ee dowllada Soomaaliya ,iyadoo markaasi la xaqiijinayo horumar masuuliyad ku jirto oo dhinaca ammaanka, isla markaana lagu dhaafay xannibaada alShabaab iyo kooxaha kale ee argagaxisada ah sida hadalka lagu yiri iyo kuwa kale ee xagjirka ah in lagu sii hayo.
Waxaan sii wadi doonaan ayaa qoraalka Susan Rice lagu sheegay taageerada aan siineyno dowladda Soomaaliya iyagoo isku dayaya inay rogaan buug 20 sano oo dagaal sokeeye ka socday inay sii hayaan horumarka dhawaan la sameeyay, isla markaana si dhaw ula shaqeeyaan dhinacyada gobolka iyo kuwa caalamiga ah si loo horumariyo nolosha dadka Soomaaliyeed oo dhan.
Arrintaan ayaa waxaa baaqyo iyo dhaleecayn kazoo jeediyey Maamulka iyo Shacabweynaha Deegaanadda Soomaaliyeed ee Puntland oo cod dheer ku sheegay in aanay xilligaan haboonayn in xayiradda Hubka laga qaado dalka Soomaaliya oo iminka dibu heshisiin iyo isu soo dabalid loogu jiro.